अब कस्ता व्यक्तिले गराउने पिसिआर परीक्षण ? सरकारले दियो यी सुझाव - Gandak News
अब कस्ता व्यक्तिले गराउने पिसिआर परीक्षण ? सरकारले दियो यी सुझाव
गण्डक न्यूज द्वारा ९ आश्विन २०७७, शुक्रबार १७:५८ मा प्रकाशित 0
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पिसिआर परीक्षण गराउनुपर्ने अवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन्।
ज्वरो तथा सुख्खा खोकी लागेका, श्वासप्रश्वासमा समस्या भएका, झाडापखाला लागेका, कुनै स्वाद वा गन्ध थाहा नपाउनेहरुको पिसिआर परीक्षण गर्न, गराउन सरकारले भनेको छ। यी कुनै पनि लक्षण नदेखिएकालाई परीक्षण नगराउन, नगर्न पनि गौतमले आग्रह गरे।
त्यस्तै संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुलाई ५ दिनपछि परीक्षण गर्न सरकारले भनेको छ।विदेशबाट फर्किएकाको पनि पिसिआर परीक्षण गर्न सकिने उनले बताए। चिकित्सकीय सल्लाहअनुसार शल्यकृया गर्नुपर्नेहरु तथा जटिल अवस्थामा रही डिस्चार्ज गर्नुपर्ने बिरामीहरुको पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्नेछ।
आइसियूमा राख्नुपर्ने सबै बिरामीहरु, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरुको पिसिआर परीक्षण गर्न सरकारले भनेको छ।
तर शल्यक्रिया तत्काल गर्नुपर्ने विरामीहरुको कोरोना रिपोर्ट नआएकै भरमा शल्यक्रिया नरोक्न पनि प्रवक्ता गौतमले आग्रह गरे।
५ देखि ७ दिन क्वारेन्टिनमा रहेका, दिर्घरोगी, ६० वर्ष नाघेकाहरु, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्नेहरु, कुटनीतिक नियोग र भिसा प्रयोजनाका लागि मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्न सरकारले अनुरोध गरेको छ।